My Thoughts My Blog: ဖိုးသူတော် မရှင်းချင်ပဲ ရှင်းရသည်..
အန်တီချမ်းမှာဖတ်လိုက်တိုံက အံသြွားသေးတယ်။ဒီဖိုးသူတော်ဘဲထင်လို့ နောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေလို့။
ဒါလဲဖတ်ဘူးသေးတယ်။ သူတော်တဲ့. လူကြို့က်ျများကြတယ်ထင်တယ်။
မခင်ဦးမေပြောတဲ့ တယောက် လေ
မမ လဲ ပြောမလို့
အတော်လူကြိုက်များတဲ့ နာမည်ပဲ ..း)
http://kothudaw.blogspot.com/ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင် ကိုသူတော် ဆိုသည်မှာလည်း ကျွန်တော် ဖိုးသူတော် မဟုတ်ရပါကြောင်း ထပ်လောင်း အသိပေးပါသည်။ သူက ကိုသူတော် နာမည်ဖြင့် ရေးသားသောကြောင့် ကျွန်တော် ဖိုးသူတော်နာမည်နှင့် ရေးသားချင်းအား မထိခိုက်ဟု ယူဆမိပါသည်။
နောက်ထပ် သူတော် နာမည်နှင့် ရေးသော အပြာဘလော့ဂ် တစ်ခု လည်း အွန်လိုင်းတွင် ရှိနေပါသေးကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အန်တီချမ်းဆီက ဖိုးသူတော်ကို ဒီဖိုးသူတော်မှတ်နေတာ။
http://kothudaw.blogspot.com/ကိုတော့ ဖိုးသူတော် မဟုတ်လောက်ဘူးထင်မိတယ်။
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ-- အချစ် နဲ့ ဘီယာ..။
အသက်-- အတက် ထွက်ပြီး..။
လိင် နဲ့ ၀ါသနာ-- အထီးမပါ. အို.. ဘာလာလာ ရတယ်..။
အလုပ်အကိုင်-- ဖုံးပြော. ပြီးတော့. ထကိုင်.. (ဖုံး ကို ပြောပါတယ်)..။
လူမျိုး-- လူဆိုး..။ ဟွန့်...။
( ဒီလို ကြေညာလိုက်ပါလား.. )
Tesla ဆိုသူရေ အပြင်မှာလည်း မောင်ဖိုးသူတော်
(နောက်ထပ် သူတော် နာမည်နှင့် ရေးသော အပြာဘလော့ဂ် တစ်ခု လည်း အွန်လိုင်းတွင် ရှိနေပါသေးကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။)